Okwu Martin Luther King "Enwere m nrọ" - Afrikhepri Fondation
Mọnde, Nọvemba 23, 2020
Okwu Martin Luther King "Arọ m nrọ"
JGwa m gị taa, ndị enyi m, n'agbanyeghị na anyị ga-ezute ihe isi ike nke taa na echi, m ka nwere nrọ. Ọ bụ nrọ rọrọ mkpọrọgwụ na nrọ ndị America. Enwere m nrọ na otu ụbọchị mba a ga-ebili ma biri n'okpuru ezi ihe ọ pụtara: "Anyị ji eziokwu ndị a akpọrọ ihe, na e kere mmadụ niile nhata."
Enwere m nrọ na otu ụbọchị, na ugwu uhie nke Georgia, ụmụ ndị bụbu ndị ohu na ụmụ nke ndị nwebu ohu nwere ike ịnọdụ ala na tebụl nke òtù ụmụnna.
Enwere m nrọ na otu ụbọchị ọbụlagodi steeti Mississippi, oke ọzara nke ikpe na-ezighi ezi na mmegbu, ga-agbanwe ka ọ bụrụ ebe nnwere onwe na ikpe ziri ezi.
Enwere m nrọ na ụmụ m anọ na-eto eto ga-ebi otu ụbọchị na mba ebe a na-agaghị ekpe ikpe maka agba akpụkpọ ahụ ha, kama maka afọ ojuju nke mmadụ ha. Enwere m nrọ a taa!
Enwere m nrọ ahụ na otu ụbọchị n'ebe ahụ na Alabama, ya na ndị na-akpa oke agbụrụ ya, ya na onye ọchịchị ya na egbugbere ọnụ ya na-agbapụta okwu "interposition" na "nhichapụ"; otu ụbọchị n’ime omimi nke Alabama ụmụ okoro ojii ojii na ụmụ obere ụmụ ojii nwere ike ijikọ aka ha na ụmụ obere ụmụ ọcha na ụmụ agbọghọ ọcha, dịka ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị.
Enwere m nrọ a taa.
Enwere m nrọ na otu ụbọchị, a ga-eme ka ndagwurugwu ọ bụla dị ebube, na ugwu ọ bụla na ugwu ọ bụla ga-eme ka ọ dị larịị, na ebe ndị siri ike ga-aghọ ala dị larịị, na a ga-edozi ebe gbagọrọ agbagọ, ebube nke Onyenwe anyị ga-ekpughe, na ihe niile dị ndụ. lee ya niile ọnụ.
EGO M EGO
3 ọhụrụ site na .12,00 XNUMX
8 jiri site na € 12,00
Zụta € 12,00
Emelitere ikpeazụ na November 23, 2020 11:28 am
Nri bara ụba na tomato ga-ebelata ohere nke cancer cancer
Tyson - Akwụkwọ (2009)
Payeng, nwoke ahụ kụrụ onwe ya ọhịa
Otu esi eme enyi na mmetụta ndị ọzọ - Dale Carnegie (Audio)
Nloghachi nke Kraist - Alice Bailey (PDF)
Categories Họrọ udi otu Ka ihichapụ AFRIKHEPRI-TV Nwee obi ụtọ EBOOKS LIBRARY mmezi AKWỤKWỌ AFRICAN Egwuregwu ndị enyi ojii NTỤRỤNDỤ akwụkwọ ỤMỤAKA gburugburu ebe obibi Ịgba ohu Ihe ndi ozo ỤLỌ NNA Ụmụ nwanyị AFRICA MGBE NA-ECHI OZI AKWỤKWỌ NA AKWỤKWỌ N'ỤLỌ AFRICAN Ndebanye / nbanye NDỊ BỤRỤ NTỤRỤ NA NDỊ ỌZỌ KINDLE NZUKWU KAMA ere akwụkwọ TV LIVE AKWỤKWỌ Ị GA-EFE AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ Akwụkwọ PDF AKWEKWỌ AKWIRKWỌ EGWÚ OZI, OZI PARADIGM KAMIT KAMA MGBE AKWỤKWỌ AFRICAN NA SAGES ILLỌ ỌR & & PSYCHOLOGY Ihe omimi na psychology Health and Medicine EGO poems PSYCHART ọgwụ EZE AFRICA AHUIKE NA MEDICINE AJỤMỤ NA ỤBỤRỤ AKWỤKWỌ UZI NA NDỊ EZIOKWU egwuregwu AKWỤKWỌ NKE GROBLI NDỤMỌDỤ NDỤMỌDỤ / OZI VIDIO Web-TV